Best ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka - [86% WIN Rate na Eprel 2021] - Mụta ahia 2
Best ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka - Full 2021 Review!
N'ihe yiri nke ịzụ ahịa nhọrọ, nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere akụ dịka ebuka, indices, ọla edo na mmanụ na-enweghị ịnwe ngwa ọrụ. Agbanyeghị - n'adịghị ka nkwekọrịta nhọrọ ọdịnala, nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye naanị nsonaazụ abụọ.
Ga - enwerịrị ego mgbe ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ga-ejedebe na ụgwọ ejiri ụgwọ, ma ọ bụ ị tụfuo osisi gị niile. N'echiche a, nhọrọ ọnụọgụ abụọ dị nso na ịgba chaa chaa dịka ị ga-esi banye na ebe itinye ego n'ịntanetị.
Na nke ahụ kwuru, enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta banyere nhọrọ ọnụọgụ abụọ tupu ị hapụ ego gị, yabụ gbaa mbọ gụọ ntuziaka anyị miri emi. N'elu ịkọwa ins na ụzọ nke otu ngwa ọrụ ego a si arụ ọrụ, anyị na-enyochakwa ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ kacha mma nke 2021
Mara: Ikwesiri ijide ihe egwu na-akpata na ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Na eziokwu, ị nwere ike ịka mma maka nhọrọ ọdịnala ma ọ bụ gbasaa ịkụ nzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akụrụngwa ego ọkaibe n'ụzọ dị egwu.
N'ime ụdị ya kachasị mkpa, nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ klas akụ na ụba nke na-enye gị ohere ịme ego na usoro ọdịnihu nke ngwa ọrụ ego. Dị ka aha ahụ na-egosi, ihe nwere ike ịpụta bụ ọnụọgụ abụọ, ma ọ bụrụ na ị ga-emeri uru a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ tufuo oke osisi gị. Ebumnuche dị oke mkpa bụ ịtụle ma ị chere na akụ a ajụjụ ga-emecha karịa ma ọ bụ n'okpuru 'ọnụahịa' nke ndị na-ere ahịa nhọrọ na-enye.
Ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na nhọrọ ị họọrọ onye na-ere ahịa na-enye ọnụahịa nkwụsị nke $ 200 na ebuka Apple, yana ụbọchị mmebi nke 10 n'ụtụtụ echi. Y’oburu n’inwe obi ojoo n’elu Apple, ikwesiri igoo ogologo oge, nke putara na ichoro na onu ahia ya gha adi elu karie $ 200 mgbe o g’esi echi. Ọ bụrụ na ọ ga - eme, ị ga - enweta uru a kapịrị ọnụ - kwuo 80% nke osisi gị. Ọ bụrụ na ọnụahịa Apple dị ọnụ ala karịa $ 200 na 10 elekere echi, ị ga-atụfu oke osisi gị niile.
Ma osisi na uru ị ga-enweta ga-adịgasị iche dabere na ọtụtụ mgbanwe. Na mbu nke a bụ iku iku mmekọrita na uru ahịa ahịa nke akụ bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa Apple dị ọnụahịa na $ 199 taa, mgbe ahụ enwere ezigbo ohere na ọ ga-akarị $ 200 echi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọnụọgụ ụgwọ ahụ abawanye na $ 210, nsogbu nke ihe a na-eme pere mpe wee si otú a - ị kwesịrị ịtụ anya ọnụọgụ dị elu nke nloghachi
A ga-ekpebikwa oke osisi na uru site na ogologo nke nkwekọrịta nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Nke a nwere ike ịdị mkpụmkpụ dịka 60 sekọnd, ruo ụbọchị 365. Dị ka o kwesịrị ịdị, ogologo oge nkwekọrịta ahụ, ohere ka ị nwere iji nweta ego. Dika odi otua, nke a gha enwe mmetuta nke oma na nloghachi gi.
N'ihe banyere ebe ịzụ ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ, e nwere ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ntanetị. Na na kwuru, i kwesịrị iji hụ na gị họọrọ ore ahia na-achịkwa. N'ime nke a, ego gị ga-adị mma n'oge niile.
Uru na ọghọm nke ọnụọgụ abụọ Nhọrọ
Kwesịrị ndị nwere agụụ dị elu maka ihe egwu
Na-ere ọtụtụ puku akụrụngwa ego na-enweghị ịnweta akụ
Họrọ ma ị chere na akụ ahụ ga-abawanye ma ọ bụ belata na ọnụahịa
Ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-enye ọkwa dị iche iche ihe egwu ịhọrọ
Ihe ntanetị ole na ole na-enye gị ohere ịpụ ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ gị tupu emebie
Nkwụnye ego ma wepụ ego na usoro ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị
A na-achịkwa ọtụtụ ụlọ ọrụ
Uru anaghị akwụ ụtụ na UK
Klas nke ngwa ngwa
Azụ ahịa na-aga nke ọma ga-eme ka ị tufuo oke osisi gị
Ghọta ọnụọgụ abụọ Nhọrọ - Key Terms
Nhọrọ nke ọnụọgụ abụọ bụ ngwongwo ego dị mgbagwoju anya nke nwere ike ịpụta mgbagwoju anya nye ndị ahịa ọhụụ. N’ụzọ dị oke mkpa, enwere ọtụtụ okwu okwu dị mkpa ịkwesịrị ịme ka anyị mara tupu anyị akọwapụta ihe atụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke ụwa.
Dị ka ndị dị otú a, gbaa mbọ gụọ ihe ndị a:
ọnụọgụ abụọ nhọrọ agbanwe ga-enye gị nhọrọ nke ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ. N'okwu Layman, nke a na-ezo aka na nduzi ị chere na akụ ahụ ga-aga. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-achọ ịzụ ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na FTSE 100.
Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ike na ndepụta ahụ, ị ​​ga-aga ogologo oge. Nke a abụghị ihe dị iche na itinye nhọrọ oku na nhọrọ nhọrọ ọdịnala, ma ọ bụ ịzụta iwu na ụwa nke CFD na Forex trading
Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, a ga-achọ ka ị gaa mkpụmkpụ ma ọ bụrụ na ị na-ebu ibu na FTSE 100. N'aka ozo, ị ga-ekwu na ọnụahịa ga-akwụsị obere mgbe nkwekọrịta ọnụọgụ abụọ ga-agwụ. Nke a abụghị ihe dị iche na ịtụkwasị a tinyere nhọrọ ma ọ bụ na-ere iji na omenala ego arena.
Ọnụahịa ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ bụ okwu dị oke mkpa ịchọrọ iji ghọta nke ọma. Ọ bụrụ na ị na mbụ ahia omenala nhọrọ contracts, mgbe ahụ ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na iku ọnụahịa na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ kpọmkwem mgbe ị na-eche echiche banyere ọnụọgụ abụọ nhọrọ. Maka ndị na-amaghị, ọnụahịa iku na-ezo aka 'n'etiti etiti' nke ahia nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Ikwesiri ikpebi ma ịchọrọ ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ na akụ, n'ihe metụtara ọnụahịa iku.
Ọmụmaatụ, ka na-ekwu na Nike ebuka ugbu a ọnụ na $ 75, na ore ahia na-enye a iku price nke $ 80. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọnụahịa nke Nike ga-akwụ ihe karịrị $ 80 mgbe nhọrọ ọnụọgụ abụọ ahụ ga-agwụ, ọ ga-adị gị mkpa ịga ogologo oge. Y’oburu n’iche ihe di iche, ikwesiri iga ebe nkpirisi.
N'ọtụtụ oge, ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ ga-enye ọnụahịa iku dị iche iche n'otu akụ. Nke a ga - enyere gị aka ịhọrọ ọkwa ihe egwu ịchọrọ. Iji maa atụ, ọnụahịa iku ahịa ndị ọzọ na Nike nwere ike ibili na $ 85 na $ 90. Nke dị elu na ọnụahịa iku, ka ị ga - enweta na usoro ị ga - aga nke ọma (yana visa-ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpụmkpụ). Nke a bụ n'ihi na ị kwesịrị ịtụ anya ụgwọ ọrụ dị elu dịka nsogbu nke azụmaahịa na-adịwanye obere.
Date Oge ngwụcha na oge ngwụcha
Na ụdị okike na nkwekọrịta nhọrọ ọdịnala, nhọrọ ọnụọgụ abụọ ga-enwe oge mmebi na oge mmebi. Nke a bụ isi ihe dị na oge mgbe nhọrọ ọnụọgụ abụọ dozie, ma ị merie ma ọ bụ tufuo ahia gị. Dị ka anyị kwuru na nkenke, ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enyekarị ụbọchị mmebi ịhọrọ site na. Nke a nwere ike ịdị mkpụmkpụ dịka 60 sekọnd, ruo afọ zuru ezu.
Dị ka a ga-atụ anya ya, mkpụmkpụ okwu ahụ, obere nyocha na nyocha na-adịwanye. N'aka ozo, enweghi onodu oru aka ma obu ihe omuma banyere uwa nke puru inyere anyi aka ichoputa uzo di n'ihu nke ihe bara uru na nkeji oge. N'ezie, ndị na-etinye ego n'oge anaghị elekarị anya na teknụzụ ọ bụla na-erughị awa 4.
O sina dị, ụbọchị mmebi nke nhọrọ ọnụọgụ abụọ gị nwere ike imetụta nloghachi gị na ahia. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịkọwapụta na ọnụahịa nke nkwekọrịta nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke na-agwụ kwa 60 sekọnd, ị ga-enweta nloghachi dị nnọọ elu ma e jiri ya tụnyere nhọrọ nke na-agwụ n'ime ọnwa atọ.
Akes Oke osisi
Abia na stakes, ego ole ichoro ikwuputa enweghi ihe metutara uru a bara. N'ụzọ dị oke mkpa, ma ọnụahịa nke akụ ahụ bụ $ 20, $ 500, ma ọ bụ $ 10,000 kwa gbọmgbọm, ounce, ma ọ bụ ngwaahịa - ị nwere ike ịkọwa oke ma ọ bụ obere dị ka ịchọrọ - n'ime oke nke onye na-ere ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ.
Ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịkọ nkọ banyere uru nke S&P 500 gwụchara karịa ọnụahịa iku akara nke ihe 3,000 mgbe ọnụọgụ ọnụọgụ ga-agwụ n'ehihie echi. Dika ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-akwụ ụgwọ nloghachi pasent, ị nwere ike ịtọ osisi nke gị nke ọma. Nke a pụtara na ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ dabara adaba ma ala na elu stakes ahia.
✔️ Nweta Pasent
N'ihe banyere ịrụ ọrụ bara uru, ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-akwado nke a dị ka pasent mmeri. Ọ bụrụ na ahia ahụ gara nke ọma, ị ga-enwezi ịba ụba ọnụego nlọghachi na osisi gị.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na nhọrọ nhọrọ ọnụọgụ abụọ ị họọrọ na-akwụ ụgwọ nloghachi nke 90%, ma ị na-etinye $ 100. Ọ bụrụ n’ịkọ nkọ, n’ụzọ doro anya, ị ga - emeri $ 90 na uru ($ 100 osisi x 90%). Ga - enwetakwa nkwụnye ego mbụ gị nke $ 100, weghachite ego gị $ 190.
Ogo nke pasent uru ga-emesị dabere na nsogbu nke ihe ga-esi na ya pụta. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-achọ ịzụ ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na mmanụ mmanụ. N'oge ahia, a na-ere mmanụ na $ 25 kwa gbọmgbọm. Nhọrọ nke ọnụọgụ abụọ na-enye ọnụahịa iku anọ na mkpokọta - abụọ maka ndị chọrọ ịga obere, na abụọ maka ndị na-aga ogologo oge.
Na okwu nke na-aga ogologo, ị nwere ike họrọ si a iku price nke $ 30 ma ọ bụ $ 50. N'ihe banyere ọnụahịa $ 30, ị nwere ike ịnweta pasent nlọghachi nke 60%. Dika ugwo onu ahia nke $ 50 odi ka o gha abia, inwere ike inweta nloghachi nke 95% ma oburu na oganihu. Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, nhọrọ ore ahia nwere ike na-enye a iku price nke $ 20 na $ 10 n'ihi na ndị na-achọ inwere ịga mkpụmkpụ. Onu mmeri ga-egosi dika odi.
🥇 Ihe Nlereanya nke a Long ọnụọgụ abụọ Nhọrọ ahia
Yabụ ugbu a ịmarala isi okwu gbasara nhọrọ ọnụọgụ abụọ, anyị nwere ike ilele atụ nke ụwa n'ezie gbasara otu azụmaahịa nwere ike isi rụọ ọrụ. Ka anyị kwuo na ị kpebiri azụmaahịa IBM.
Opt na-ahọrọ ndị IBM ngwaahịa ọnụọgụ abụọ nhọrọ na Mmebi nke 24 awa
Ọnụahịa nke IBM ugbu a bụ $ 120
The ore ore ahia setịpụrụ ogologo iku price nke $ 124
Onu mmeri bụ 80%
You na-enwe mmetụta na bullish na IBM, yabụ ị kpebiri itinye usoro dị ogologo na oke $ 100
N'ime oge 24, nkwekọrịta nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-agwụ na ọnụahịa nke $ 127
Ka ị gara ogologo, na nhọrọ ọnụọgụ abụọ mechara na ọnụahịa dị elu karịa ọnụahịa iku nke $ 124, ị meriri ahia gị
Nloghachi gị niile bụ $ 180. Nke a nwere $ 80 na uru ($ 100 osisi x 80%) na mbụ $ 100 gị.
N'ịtụle ihe ọzọ ga-esi na ya pụta, ka anyị kwuo na ebuka IBM dị ọnụahịa na $ 123 mgbe ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nwụrụ. Dị ka nke a bụ Mpekarị karịa iku iku nke $ 124 i were, ị ga-efunahụ ahia ahụ. Dịka, onye na-ere ahịa ga-edebe ego gị $ 100.
🥇 Ihe Nlereanya nke a Short ọnụọgụ abụọ Nhọrọ ahia
Iji hụ na ị ghọtara otu ahia ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ dị mkpirikpi si arụ ọrụ, ka anyị lelee ihe atụ ọsọ ọsọ. Anyị ga-asị na ị na-enwe mmetụta bearish na ọnụahịa nke Bitcoin, yabụ na ị họrọ ịga obere.
Opt na-ahọrọ a Bitcoin ọnụọgụ abụọ nhọrọ na Mmebi nke 1 izu
Ọnụ ego Bitcoin ugbu a bụ $ 6,500
The ore ore ahia seta a obere iku price nke $ 5,900
Onu mmeri bụ 95%
Bitcoin na-enwe mmetụta bearish na Bitcoin, yabụ ị kpebiri itinye usoro dị mkpirikpi na $ 500
N'ime oge 48, nkwekọrịta nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-agwụ na ọnụahịa nke $ 5,850
Ka ị na-aga obere, na ọnụọgụ abụọ nhọrọ okokụre na a ala price karịa iku price nke $ 5,900, ị merie gị ahia
Nloghachi gị niile bụ $ 975. Nke a nwere $ 475 na uru ($ 500 osisi x 95%) na mbụ $ 500 gị.
N'ịtụle ihe ọzọ ga-esi na ya pụta, ka anyị kwuo na ọnụahịa Bitcoin dị $ 5,901 mgbe ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ kwụsịrị. N’agbanyeghi na $ 1 kuru gi, i ghaghi ila ahia gi. Nke a bụ n'ihi na ọnụahịa Bitcoin dị elu karịa ọnụego iku nke $ 5,900 mgbe nkwekọrịta ọnụọgụ abụọ nwụrụ. Dika odi otua, i gha funari $ 500 gi.
Olee akụ ị nwere ike Tradezụa na ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Brokas?
N'ihe yiri nke a na nyiwe nhọrọ nke ọdịnala, ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye gị ohere ịnweta narị otu narị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku nke ngwa ego. Iji nye gị echiche nke ọtụtụ klas klas ị nwere ike ịkọ nkọ mgbe ị na-azụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ, lelee ndepụta dị n'okpuru.
Ndepụta Ahịa Ahịa Ahịa
Enwere m ike ịkpata ego si a ọnụọgụ abụọ Nhọrọ ahia n'oge?
Otu uru dị na itinye ego na nkwekọrịta nhọrọ ọdịnala bụ na ị ga - enwe ike ịmechi uru gị ngwa ngwa. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ị na-azụ nhọrọ ndị America, ị nwere ike ịpụ na azụmaahịa gị n'oge ọ bụla n'etiti oge ị na-akwụ ụgwọ gị, yana ụbọchị nke nhọrọ ga-agwụ.
N'ụzọ dị mwute, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ anaghị ekwe ka ịme nke a, yabụ ị ga-echere ruo mgbe nkwekọrịta ahụ ga-agwụ tupu ị mata nsonaazụ nke nzọ gị.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị gara ogologo oge na nkwekọrịta azụmahịa ọnụọgụ abụọ nke Apple. I were a iku price nke $ 270 na Mmebi nke 7 ụbọchị. Ọ bụ ezie na ebuka Apple dị na ego n'ụbọchị 5, ị nweghị ike ịchọpụta uru gị. Ọ bụrụ na ọnụahịa Apple wee mechie ihe na-erughị $ 270 n'ụbọchị 7, ị ga-efu nzọ gị. Nke a bụ naanị ọdịdị nke ohere nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
Site na nke a, ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye ikike iji wepu ahia n'oge. Ọ bụrụ na ha emee, a ga-enye gị ego 'ego si', nke ga-abụ ihe ga-aba ma ọ bụ pekarịa osisi gị mbụ. Mee elu mee ala, ego ị ga-enweta ga-adabere na ezigbo oge nke nhọrọ ọnụọgụ abụọ gị na-ejedebe na ego.
Downsides na ọnụọgụ abụọ Nhọrọ
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị gbanyela obi gị na nhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ọ bara uru ịtụle ụfọdụ n'ime ala.
Dịka, jide n'aka na ị ga-atụle ihe ndị a tupu ịmalite ọrụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ gị:
O nwere oke ikike
N'ihe banyere ndị na-ere ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ọ bụ naanị nsonaazụ abụọ nwere ike ịpụta. I gha merie onodu mmeri gi, ma obu tufuo osisi gi. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’itinye $ 100 na mmeri 80%, ị ga-enweta uru $ 80 ma ọ bụ tufuo $ 100 gị. Ọ bụ ezie na nke a ga-ezuru ọtụtụ n'ime gị, ọ dị mkpa icheta na ị nwere ike ịlafu ọtụtụ nloghachi.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị kwenyesiri ike na uru GBP / USD na-abawanye na ụbọchị 7 sochirinụ.
Iji mee ka ihe dị mfe, ka anyị kwuo na ọnụahịa iku bụ 1.35, ị ga-etinye $ 300, yana mmeri pasent bụ 70%.
N'ime ụbọchị 7, GBP / USD dị ugbu a na 1.40. Nke a pụtara na ị meriri nzọ gị, yabụ ị mere $ 210 na uru ($ 300 x 70%).
Dị ka nke a dị, chee ego ole ị gaara eme site na ịhọrọ ịre ahịa na-agbasa mgbasa? Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị staked $ 1 kwa isi, na ihe dị iche n'etiti iku price nke 1.35 na-emechi price nke 1.40 bụ 500 ihe, mgbe ahụ ị gaara $ 500. Mee ka osisi ahụ gbakwunye ruo $ 2, ma ị na-ele $ 1,000.
Ndị ọzọ okwu, ọnụọgụ abụọ nhọrọ amachi gị laghachi na ofu mmeri pasent, mgbe amasị nke mgbasa ịkụ nzọ, CFD, na omenala nhọrọ agbanwe na-enye ohere ka uncapped uru.
🥇 Enweghi Ike Earlypụ Azụmaahịa Oge
N'ọtụtụ ikpe, ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-arụ ọrụ dị ka nkwekọrịta nhọrọ Europe. N'okwu Layman, nke a pụtara na ị nweghị ike ịpụ ahịa tupu oge na ụbọchị ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ga-agwụ. Nke a nwere ike ịbụ nsogbu maka isi ihe abụọ - ma nke etiti ya na njikwa ihe egwu.
Firstly, ị gaghị enwe ike iji ego gị ọnụọgụ abụọ nhọrọ mgbe ị na-na ego ruo mgbe nkwekọrịta-agwụ. Ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-eme mkpụmkpụ ọnụahịa nke $ 200, a na-akwụ ụgwọ ahụ ugbu a na $ 195. Naanị ụbọchị 2 ka ị ga-aga ruo mgbe nkwekọrịta ahụ ga-agwụ, enwere ike ịnwa gị ịmechi uru gị na obere mmeri mmeri. Otú ọ dị, ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ nhọrọ anaghị ekwe ka ịme nke a.
Nke abuo -a ikekwe kachasị mkpa, ọnụọgụ ọnụọgụ nhọrọ anaghị enye ọtụtụ n'ụdị mgbochi ihe egwu. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị kpebiri ịga ogologo mmanụ na $ 29 kwa gbọmgbọm. Iji mebie mfu gị na ihe omume ndị ahịa na-emegide gị, iwu nkwụsị ga-enye gị ohere ịpụ na azụmaahịa gị na-akpaghị aka mgbe akwụ ụgwọ ụfọdụ (kwuo $ 27 kwa gbọmgbọm). Agbanyeghị, nke a abụghị ihe ị ga - eme mgbe ị na - azụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
🥇 Ikike tufuo oke osisi
Ọ dịkwa mkpa icheta na azụmaahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-agaghị aga nke ọma ga - eme ka ị tufue osisi gị niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gafee mmanụ na mkpokọta $ 200, ma ị ga-ejedebe na ego ahụ, ị ​​ga-atụfu $ 200 gị dum.
Ọ bụ ezie na nke a bụkwa ikpe mgbe ị na-ere nhọrọ nhọrọ ọdịnala America - ọ bụrụhaala na ị ga-atụfu ụgwọ gị ma ọ bụrụ na ị gaghị emebi ọnụego iku, ị ga-enwe ma ọ dịkarịa ala ịhọrọ nhọrọ nke ịchụ ego gị na obere ntakịrị ọnwụ - ma ọ bụghị ka ihe niile funahụ.
N'ikwu nke ahụ, ịhọrọ maka ikpo okwu CFD na-enye ọbụna nchebe dị ukwuu karịa ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ, dịka naanị ụzọ ị ga-esi tufuo oke osisi gị bụ ma ọ bụrụ na itinye ntinye ego - ma ọ bụ akụ na-efu efu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụta ọnụahịa IBM nke ruru $ 1,000 site na CFDs, ọnụahịa ahụ wee daa site na 10%, naanị 10% nke osisi gị ga-efunahụ gị. Nke a ga - abụ ikpe mgbe ị na - azụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ, ebe ọ bụ na ọ bụ nsonaazụ 'niile-ma ọ bụ ihe ọ bụla'.
Ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka na Taxtụ
Dabere na ebe ibi, ị nwere ike irite uru site na uru na-enweghị ụtụ isi mgbe ị na-azụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ. Dịka ọmụmaatụ - na dị ka mgbasa ebe ịkụ nzọ na-agbasa, ndị na-etinye ego na UK enweghị ụtụ isi nhọrọ ọnụọgụ abụọ, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na HMRC na-ele mpaghara ahụ anya dị ka ịgba chaa chaa.
Nke a na - enye gị ohere idobe 100% nke uru gị, nke dị iche na azụmaahịa na CFD ma ọ bụ ikpo okwu Forex. Agbanyeghị, nke a agaghị abụ ikpe na ikike niile, yabụ a dụrụ gị ọdụ ka gị na onye na-akwụ ụgwọ ụtụ isi tozuru etozu kwuo.
Esgwọ na ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka
N'ihe gbasara ụgwọ, ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ nhọrọ na-enye gị ohere ịzụ ahịa na enweghị ọrụ. Ihe kpatara nke a bụ na ị na-ịkụ nzọ n'ụzọ dị irè na onye na-ere ahịa ozugbo, ma ọ bụghị na adakọtara gị na ndị ahịa ndị ọzọ.
Dịka, ọ bụrụ na ị tufuo ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ, onye na-ere ahịa ga-ejide osisi ị tụfuru. Ọzọkwa, ị nweghị akụnụba na-akpata mgbe ị na-azụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ, yabụ enweghị ihe ọ bụla achọrọ maka onye na-ere ahia ịzụta ma ọ bụ ree ngwá ọrụ ego na nnọchite gị.
Naanị ụgwọ ị ga-achọ iji leba anya mgbe ị na-ahọrọ onye na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ n’ihe gbasara nkwụnye ego na mwepu ego. Ọ bụ ezie na enwere olile anya na ikpo okwu na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ akaụntụ gị na-enweghị ebubo, nke a abụghị mgbe niile. N'otu aka ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-amata ihe kacha nta nkwụnye ego na ego ndọrọ ego nọ n'ọnọdụ.
Olee otú Chọta Best ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka?
Yabụ ugbu a ị matara ihe niile na ngalaba ọrụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ịmalite ugbu a ịche maka onye na-ere ahịa ịchọrọ iji. Nke a bụ n'ihi na ọnweghị ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ otu.
Dịka ọmụmaatụ, ebe onye na-ere ahịa nwere ike inye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego, ọ gaghị adabara ma ọ bụrụ na ọ kwadoghị usoro ịkwụ ụgwọ ịchọrọ.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ka ị tụlee ihe ndị na-esonụ tupu ịmepe akaụntụ na ikpo okwu ọhụrụ.
Ihe kachasị mkpa ịkwesịrị ịtụle bụ ma ọnweghị ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-achịkwa. Akụkụ ụfọdụ nke oghere yiri nke Wild West, yabụ ịkwesịrị ịkpachara anya banyere ụdị ikpo okwu ị debanyere.
Nke a bụ n'ihi na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ anaghị achịkwa ma ọlị, ya mere, nke a kwesịrị ime dị ka isi ọkọlọtọ na-acha uhie uhie. Ọbụna ma ọ bụrụ na a na-achịkwa onye na-ere ahịa, ịkwesịrị ikpebi ịtụkwasị obi nke onye nyere ikike.
Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahịa na-ahọrọ ikike na Marshall Islands karịa UK FCA ma ọ bụ CySEC dị na Saịprọs kwesịrị ịkụ mgbịrịgba mkpu. Mee elu mee ala, ebe ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nwere ike ịnwe isi na nchekwa nke itinye ego gị.
Pay Paygwọ ✔️kwụ edgwọ Akwadoro
Kwesịrị ịchọpụta ụzọ nkwụnye ụgwọ nke ikpo okwu na-akwado. Dị ka ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enyekarị ndị ahịa ahịa ọrụ ha, ị ga-ahọrọkarị ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
Nke a kwesịrị ịgụnye debit ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ, inyefe ụlọ akụ, ma ọ bụ obere akpa ego dị ka Paypal, Skrill, ma ọ bụ Neteller. Echefula ilele ụgwọ ndị a na-etinye na usoro ịkwụ ụgwọ gị ahọpụtara - yana akaụntụ opekempe ndị dị mkpa ịchọrọ.
Ary ọnụọgụ abụọ Nhọrọ
Ọ dị mma na nke ọma site na iji onye na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-akwado usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ, mana ị ga-ahapụ mmechuihu ma ọ bụrụ na enweghị ya n'ahịa a na-adọkpụ.
Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịlele nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke onye na-ere ahịa na-enye tupu ịbanye. Ọ kachasị mma ịhọrọ nyiwe na-enye ọtụtụ klas klaasị - gụnyere mana ọnweghị oke na ebuka, ndeksi, ngwa ahịa na mkpuchi.
✔️ Oke Osimiri
Dịka anyị kwurịtara na ntuziaka anyị niile, nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ klas bara ụba nke ukwuu. Ka o siri dị, nzọ kachasị mma gị bụ ịmalite site na iji obere osisi ruo mgbe ị ga-amalite inwe ahụ iru ala.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye gị ohere itinye naanị $ 1 ​​kwa nkwekọrịta, nke dị mma. Agbanyeghị, anyị ahụkwala nyiwe nke wụnye opekata mpe azụmaahịa nke $ 100. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịrịọ arịrịọ dị elu nke ọnụọgụ abụọ, ọ gaghị adịrị ndị ahịa ọhụụ.
✔️ Imeri Pasent agegwọ
Youkwesịrị inwe nghọta siri ike banyere ihe mmeri pasent mmeri na-enye. Dịka ọmụmaatụ, ụkpụrụ ụlọ ọrụ na oghere nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ mmeri kachasị nke 95%. Yabụ, nzọ $ 1,000 ga-eweta ụgwọ kacha elu nke $ 950. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ ga-enye ọnụ ọgụgụ mmeri dị ala - ikekwe na 70% -80% nso.
Na njedebe nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, anyị ahụkwala ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye ọnụọgụ mmeri nke karịrị 100%. Echefula, ka ọnụọgụ mmeri na-abawanye, ohere ị ga-erute na ego ga-ebelata.
Asọmpi nke Strike Rates
Na-eduga na ngalaba dị n'elu, ọ dịkwa mkpa ka ị nyochaa asọmpi nke ọnụọgụ ọnụọgụ nke onye na-ere ahịa na-enye. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-azụ ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na Facebook, nke dị ọnụahịa ugbu a na $ 129.
Abụọ na Broka na-enye a mmeri pasent ọnụego nke 80%
Broker A nwere ọnụahịa dị ogologo nke $ 134, yana ọnụego mkpụmkpụ nke $ 124
Broker B nwere ọnụahịa dị ogologo nke $ 138, yana ọnụego mkpụmkpụ nke $ 120.
Kedu nke n'ime ndị na-ere ahịa nhọrọ abụọ ị chere na ọ bụ asọmpi? Ọfọn, nke a ga-abụ Broker A. Ihe kpatara nke a bụ na agbanyeghị na ị na-enweta mmeri mmeri nke 80% na nyiwe abụọ ahụ, Broker B chọrọ ka Facebook na-ebu ibu gafere $ 138 mgbe ọ na-aga ogologo oge, yana $ 120 mgbe ọ na-aga obere. Agbanyeghị, Broker A naanị chọrọ ụgwọ iku nke $ 134 / $ 124 iji nọrọ na ego ahụ, nke ga-adị mfe karị.
Tools Agụmakwụkwọ na Nnyocha
Ọ bụ ezie na ngwaọrụ nyocha ga-enwe oke ojiji mgbe ị na-azụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ụbọchị njedebe dị oke mkpụmkpụ, ha nwere ike ịdị oke irè na ogologo ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ere ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ụbọchị njedebe nke ọnwa 6, ị ga-achọ ịnweta ọkwa dị iche iche nke teknụzụ na ngwaọrụ nyocha.
Ọ ga-aba uru ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ na-enye akụkọ dị mkpa n'oge, yana nyocha ahịa na-aga n'ihu. Banyere agụmakwụkwọ, anyị na-ahọrọ ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye ndị ahịa ahịa ọhụụ. Nke a kwesịrị ịgụnye ọtụtụ vidiyo na blọọgụ mara mma, usoro ntụpụ ụkwụ, na webinarị oge niile.
Ọ dịkwa mkpa ịhọrọ onye na-ere ahịa nke na-enye nkwado ndị ahịa dị elu. Dị ka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-azụkarị na 24/7 ndabere, ị ga-achọ iji onye na-ere ahịa nke ndị na-enye nkwado na-akwado elekere. Nke a ga-abịa n'ụdị nkata ndụ, email, na nkwado ekwentị.
Ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Brokas: Otu esi amalite Taa
Ọ bụrụ na ị nwetara mkpịsị aka gị na usu ma chọọ ka ịmalite azụmaahịa ọnụọgụ ọnụọgụ ugbu a, n'okpuru anyị edepụtara usoro nduzi dị mfe ị ga-agbaso. Nke a na-agụnye usoro njedebe nke ịmepe akaụntụ, itinye ego, na ịtọlite ​​ahia nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
Kwụpụ 1: Chọta ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ kacha mma maka mkpa gị
Firstgbọ mmiri izizi ga - abụ ịchọta ọnye ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na - ezute ahịa gị. Bestzọ kachasị mma iji mee nke a bụ ịgbaso ndụmọdụ anyị depụtara na ngalaba dị n’elu. Isi ihe elebara anya kwesiri ibu iwu, ahia ahia, na uzo ugwo.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji chọta onye na-ere ahịa ọnụọgụ ọnụọgụ onwe gị, gbadaa na ala nke ibe a iji nyochaa ihe atọ kachasị elu anyị na-eme na 2021. Ndị ahịa ọnụọgụ abụọ anyị na-atụ aro ka a bịa tupu oge nyocha, yabụ nwee obi ike na ego gị bụ nchekwa mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị na-eji usoro nchịkwa nhọrọ ọnụọgụ abụọ (nke ị kwesịrị ịbụ), ị ga-emepe ugbu a akaụntụ. Nke a choro ka ị nweta ụdị ozi dị mkpa, dị ka nke gị:
Iji hụ na onye na-ere ahịa na-agbaso ụkpụrụ iwu na-akwadoghị ego, ọ ga-ajụkwa gị ka inyocha njirimara gị. Imirikiti ndị na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye gị ohere ịme nke a site na ibudata otu NJ gị nyere gị gọọmentị. Nke a nwere ike ịbụ paspọtụ ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala.
Ozugbo i bugoro ID gị, ị ga-etinyezi ego. Nhọrọ kwesịrị ịgụnye debit / kaadị akwụmụgwọ, ma ọ bụ nyefe ụlọ akụ. Jide n'aka na ị ga-ezute ego nkwụnye ego nke onye na-ere ahia.
Kwụpụ 4: Chọọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ
Ga-achọ ugbu a ịchọta ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ ịchọrọ ịzụ. Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke dị iche iche na klas nke akụnụba, gafee ngalaba nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke saịtị ahụ.
Ozugbo e, na-agagharị site na ọtụtụ dị iche iche ọnụọgụ abụọ nhọrọ ahịa na ore ahia na-akwado. Nke a kwesiri ịgụnye mmasị nke ebuka na mbak, mmanụ na gas, indices, ọla siri ike, yana mkpuchi.
Ozugbo ịchọtara ihe ịchọrọ ịzụ ahịa, lezie anya nke ọma iji chọpụta usoro ndị a:
Bọchị na Oge Mmebi ga-agwụ
Kwụ na Placekwụ 5: Ebe gị ọnụọgụ abụọ Nhọrọ ahia
Ikwesiri idoba ahia ahia gi. You enyochala usoro dị mkpa, yabụ ị kwesịrị:
Tinye osisi gị. Echefula, ọ bụrụ na itufu nzọ ahụ, ị ​​ga-atụfu oke gị n'ozuzu ya
Kpebie ma ịchọrọ ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ.
Ozugbo etinyela iwu gị, ị ga-enwe obi ebere na ahịa azụmaahịa. Ọtụtụ mgbe, ị ga-echere ka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ga-agwụ iji chọpụta ma nzọ gị ọ gara nke ọma.
Ọnụọgụ abụọ Nhọrọ Broka nke 2021 - Top 3 Picks anyị
Na-achọ ịmalite ịzụ ahịa nhọrọ ọnụọgụ ugbu a, mana ịnweghị oge iji nyochaa onwe gị? N’okpuru, ị ga - ahụ ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ kachasị elu nke 3.
1. Crypto Trader– Sonyere anyị wee bido ịba ọgaranya na Crypto Trader!
The Crypto Trader bụ otu echebere naanị maka ndị na-awụli elu na nzuzu nke Bitcoin na-enye ma jiri nwayọ nwee akụ na ụba na ịme ya. Ndị òtù anyị na-enwe obi ụtọ ịlaghachi na gburugburu ụwa kwa ọnwa mgbe ha na-akpata ego na laptọọpụ ha nwere naanị nkeji ole na ole nke "ọrụ" kwa ụbọchị.
Nkwụnye ego kacha nta nke $ 250
Enweghị nkwa na ị ga-akpata ego
Gaa Leta Crypto Trader
Na nchịkọta, nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere akụ na pịa bọtịnụ. Naanị ihe ị ga - eme bụ ikpebi ma akụrụngwa ahụ ọ ga - emechi ọnụahịa dị elu ma ọ bụ dị ala karịa ọnụ ahịa iku akwụpụtara Nkwekọrịta nwere ike ịdịru naanị 60 sekọnd, ruo ụbọchị 365.
Agbanyeghị, nhọrọ ọnụọgụ abụọ agaghị abụ maka onye ọ bụla - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye ahịa na-achọ iji atụmatụ egwu egwu. O sina dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ụda nhọrọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, anyị akọwachaala ụzọ na ụzọ oghere ego a si arụ ọrụ.
Iji nyere gị aka ịhọrọ otu ikpo okwu iji zụọ ahịa, anyị atụlekwala ndị na-ere ahịa ọnụọgụ abụọ kachasị elu nke 2021. N'ikpeazụ, naanị hụ na ị ghọtara nke ọma ihe egwu nke ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, ebe ị ga-atụfu oke osisi gị. ọ bụrụ na nzọ abụghị ihe ịga nke ọma.
Kedu ihe dị iche na nhọrọ ọdịnala na nhọrọ ọnụọgụ abụọ?
Ọ bụ ezie na o yitụrụ na ọdịdị, ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ anaghị enye gị ohere ịpụ azụmahịa tupu nkwekọrịta ahụ agwụ, ebe nhọrọ ọdịnala na-eme. Ọzọkwa, ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-enye gị ohere ị nweta ego a kapịrị ọnụ, ebe nhọrọ ọdịnala bụ ndị a na-ekpuchighị.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ?
Ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ dịka Binary.com na-enye gị ohere ịkwụnye naanị $ 5. Ndị ọzọ na-achọ karịa, yabụ gbalịa lelee nke a tupu imepe akaụntụ.
Kedu ihe bụ 'ọnụahịa iku' na azụmaahịa nhọrọ?
Ọnụahịa iku ego na-ekpebi etiti etiti na azụmaahịa, ma kpebie ego ole ngwa ahịa achọrọ kụrụ ka ị merie. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụahịa iku bụ $ 200 ma ịchọrọ ịga ogologo oge, ị ga-emeri nzọ ahụ ma ọ bụrụ na nkwekọrịta ahụ mechiri na ọnụahịa nke $ 200.01 ma ọ bụ karịa.
Ndị na-ere ahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-achịkwa?
Ee na mba. Imirikiti ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-achịkwa. Agbanyeghị, ọtụtụ nyiwe na-arụ ọrụ na-enweghị nnyefe iwu. Dị ka ndị dị otú a, naanị debanye aha na onye na-ere ahịa nke a na-achịkwa.
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ ọ na-enweta ụtụ isi?
Nke a dabere na mba ibi na ya. Na UK, a na-ele azụmaahịa nhọrọ ọnụọgụ abụọ dị ka ịgba chaa chaa site na HMRC, yabụ uru anaghị akwụ ụtụ. Agbanyeghị, nke a nwere ike ọ gaghị abụ ikpe ebe ọzọ, yabụ kpachara anya ịchọ ndụmọdụ ọkachamara.
Ogologo oge ole ka nhọrọ ọnụọgụ abụọ ga-adịru?
Ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-amalite site na ụbọchị mmebi nke naanị 60 sekọnd, ruo 1 afọ.
Ego ole ka ị ga - eme mgbe ị na - azụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ?
Ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ ga-ekwupụta 'ọnụọgụ mmeri' na nkwekọrịta gị họọrọ. Ọ bụrụ na ahia ahụ gara nke ọma, ị kwesịrị ịmụba ọnụego ahụ na osisi gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọnụego mmeri bụ 80% na ị ga - etinye $ 10, ị ga - enweta $ 8 na uru.